Faah Faahin:- Dhowr madaafiic oo lagu weeraray xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah Faahin:- Dhowr madaafiic oo lagu weeraray xaafado ka tirsan magaalada Baydhabo
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa madaafiic ay Al-shabaab habeenkii xalay ku weerartay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, gaar ahaan xarumo ay ku sugnaayeen ciidamada Itoobiya.
Dhowr madaafiic ayaa sida la sheegay ku dhacay agagaarka xarunta madaxtooyadda maamulka Koonfur Galbeed, iyadoona sidoo kale ay madaafiic kale ku dhaceen xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo.
Inta la og yahay waxaa madaafiicdaasi ku geeriyooday 1 qof oo rayid ah, iydoona sidoo kale ay ku dhaawacantay ilaa 5 kale.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka magaalada Baydhabo oo saakay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in saacadda markii ay ahayd 3am ay mar-qura ka warheleen dhawaqa madaafiic gaareysay ilaa 8, iyagoona sheegay inay cabsi ku waabariisteen.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saakay howlgalo baaritaano ah ka wada xaafadaha magaalada Baydhabo, waxaana ay ciidankaasi ku raad-joogaan goobihii laga soo tuuray madaafiicdaas.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid baaritaankaasi lagu soo qabtay, waxaana xaafadaha magaalada Baydhabo saakay lagu arkayaa ciidamo badan, inkastoo isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ka jiray halkaasi uu caadi yahay.